Maxkamada caalamiga ah ee ICJ oo 2 bil ah dib u dhigtay dhageysiga Dacwadda Soomaaliya iyo Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Maxkamada caalamiga ah ee ICJ oo 2 bil ah dib u dhigtay...
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Cali Fiqi ayaa sheegay in Maxkamada caalamiga ah ee ICJ ay dib u dhigtay mudo laba bilood ah dacwaddii xagga badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya.
Danjire Cali Fiqi oo u waramaayey Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in dacwada dhageysigeeda ay bilaaban doonto bisha November 04 teeda 2019 ,wuxuuna intaa ku daray in ay kalsoomi badan ku qabaan natiijada iyo waxa ka soo baxa halkaasi.
Safiirka ayaa muujiyey in Maxkamada ICJ ay ka xun tahay go’aankan balse ay ku gaartay codsi ka yimid Dowladda Kenya kaasi oo ay ku codsatay in dacwada dhageysigeeda dib loo dhigo mudo Sanad ah balse Maxkamadda aanay ka ogolaan.
Go’aankan Maxkamadda ICJ ka soo baxay ayaa ka dhigan in Maxkamaddu aysan fulin dalabkii Dowladda Kenya ee Baddeena nagu heysata maadaama ayagu ay codsadeen in mudo Sanad ah dib loo dhigo oo kaliya Laba bilood dib loo dhigay.
Previous articleXulka Qaranka Soomaaliya oo ka adkaaday Zambabwe
Next articleKheyre oo kala hadlay Ergada Galmudg danta guud